Undelete iPhone Notes: Olee otú undelete Notes on iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS
> Resource> iPhone> undelete Notes on iPhone 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4S / 4 / 3GS
Ị pụrụ undelete ndetu na iPhone 6S / 6S Plus / 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4S / 4?
Na kọmputa, mgbe anyị na-ezighị ihichapụ ihe, anyị pụrụ imezi ya site weghachi ya na ahịhịa ma ọ bụ egweri biini. Olee banyere na iPhone? Nwere ike anyị na-undelete ihe dị ka ndetu, mgbe anyị na-ezighị ezi ihichapụ ha? E nweghị ahịhịa ma ọ bụ egweri biini. Ya mere, anyị nwere ike ghara imezi ya dị ka anyị na-eme na kọmputa, ma e nwere ụzọ ọzọ.
N'ozuzu ndetu bụ ka e nwere n'oge ahụ mgbe ị na-ehichapụ ha, ma ọ bụrụ na ị dee nza nke ọhụrụ data gị iPhone na overwrite ha. N'ihi ya, ị ga mma ike anya gị iPhone ma ọ bụ ka ya n'ime ụgbọ elu mode, nke mere na i nwere ike inwe a ukwuu ohere undelete ndetu na gị iPhone. Iji mee ya, ị chọrọ onye iPhone ndetu undeleting ngwá ọrụ na mbụ. Unu nwere otu? Gbalịa Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows)? Ha abụọ bụ ndị 100% enem irè n'ihi na ị na undelete ndetu na iPhone 6S Plus / 6S / 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4S / 4 / 3GS.
Download free ikpe version n'okpuru nwere a na-agbalị for free.
Undelete iPhone ekwu na 3 nzọụkwụ
Ọzọ, ka anyị na-agbalị undelete iPhone ekwu na Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) (iOS9 akwado). Ọ bụrụ na ị a Windows onye ọrụ, ị nwekwara ike na-yiri nzọụkwụ na Windows version nke usoro ihe omume.
Ka malitere, họrọ a mgbake mode ebe a: naputa site na iOS Ngwaọrụ, nke-enye gị ohere kpọmkwem iṅomi gị iPhone ka undelete ndetu. Mgbe ahụ jikọọ gị iPhone na kọmputa.
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 5 ma ọ bụ iPhone 4S:
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS:
Nzọụkwụ 2. iṅomi gị iPhone
Dị nnọọ ka window-egosi n'elu, iPhone 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4S ọrụ nwere ike nnọọ pịa Malite bọtịnụ ike iṅomi gị iPhone. Ezie na iPhone 4 / 3GS ọrụ dị mkpa iji nweta n'ime scanning mode na mbụ. I nwere ike iso nkọwa na mmemme si window ma ọ bụ ndepụta dị n'okpuru ime ya:
Press Ike na Home buttons n'out oge maka 10 sekọnd.
Mgbe ahụ Dr.Fone maka iOS software ga iṅomi gị iPhone site onwe ya mgbe ị ga-esi n'ime scanning mode.
Nzọụkwụ 3. Preview na undelete ndetu si iPhone
N'ezie ị pụrụ amalite ịhụchalụ scanned data Mgbe iṅomi bụ na-enwe ọganihu. Na n'aka ekpe, e nwere edemede nke data hụrụ na gị iPhone. Pịa Notes ka ịhụchalụ nkọwa. Ego ndị ị chọrọ na pịa Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị. Ugbu a, gị iPhone ndetu na-undeleted.
Cheta na: Data ịchọta ebe a na-agụnye ehichapụ data na ndị ka na-na gị iPhone. Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị ehichapụ n'anya, Ị nwere ike ikewapụ ha site na iji slide button n'elu: Naanị gosipụta ehichapụ ihe.